FAQ - WebsiteDesign.com.mm
မေး။ Website ထဲက ပုံတွေ၊ စာတွေကို ကိုယ်ဟာကိုယ် ပြောင်းလို့ရလား။
Q: Can I edit the website on my own?
ဖြေ။ လူကြီးမင်းရဲ့ Webiste ဟာ တည်းဖြတ်နိုင်သော Website (Dynamic CMS) အမျိုးအစားဖြစ်ပါက ကိုယ်တိုင် ပုံတွေ၊ စာတွေကို ပြောင်းနိုင်ပြီး၊ တည်းဖြတ်ရန် မလိုသော Website (Static HTML) ဖြစ်ပါက ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်းရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား လိုအပ်ချက်အရ ဘယ်လို Website မျိုးတည်ဆောက်သင့်သည်ကို ရှေ့စာမျက်နှာတွင် အကြံပြုဆွေးနွေးထားပါသည်။ ဤနေရာတွင်နှိပ်၍ ကြည့်ပါ။
Yes, you can, if the website is CMS (Content Management System) but it isn’t easy foraStatic (HTML) website. We have constructively advised the kind of websites you should be building, based on your business requirements. Click here to find out more!
မေး။ Static HTML Website ဆောက်ထားပြီး ပြင်ဆင်ဖို့လိုလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ။
Q: How will your agency help when my static website needs to edit?
ဖြေ။ Website Package တိုင်းမှာ မေတ္တာလက်ဆောင် တစ်နှစ်ကို ဘယ်နှစ်ခါ Update လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ပါပြီးသားပါ။ အကယ်၍ Update အကြိမ်ရေ ကုန်အောင်သုံးပြီးခဲ့ရင်တောင် ၁ နာရီဝန်ဆောင်မှုကို ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ထဲနဲ့လူကြီးမင်းစိတ်တိုင်းကျ Update လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။
A: All our packages include the number of times that we shall edit free for you inayear. Even if you used it up, the extra cost is only Ks 10,000/ hr.
မေး။ WebsiteDesign.com.mm က ဆောက်တဲ့ Website တွေက Mobile ဖုန်းတွေမှာ အဆင်ပြေလား။
Q: Will our website compatible with mobile phones?
ဖြေ။ WebsiteDesign.com.mm က ဆောက်တဲ့ Website အမျိုးအစားဟာ Computer, Mobile Phone & Tablet များ ပေါ်မူတည်၍ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ (ချုံ့/ ချဲ့ ရန်မလို) အဆင့်မြင့် (Fully Responsive) Website များသာဖြစ်ပါတယ်။
A: Yes, all kinds of websites that our agency builds are fully responsive and compatible with all mobile devices, tablets, laptops and desktop computers.
မေး။ WebsiteDesign.com.mm က ဆောက်ပေးတဲ့ Website တွေက English လိုလား၊ မြန်မာလိုလား၊ ဒါမှမဟုတ် ၂ ဘာသာလုံးနဲ့လား။
Q: How many languages will it be built in?
ဖြေ။ ထည့်သွင်းချင်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ အရေအတွက်ကို လူကြီးမင်း စိတ်ကြိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ စာသား (Content) ကိုတော့ လူကြီးမင်းမှ အချိန်မှီ ထောက်ပံ့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Package နှင့် ဈေးနှုန်း များကြည့်ရန်
A: By default, it is one, but you can have many languages as long as your provided contents are on time. Pricing & Packages may vary; Click here to see more!
မေး။ တစ်ချို့Website တွေမှာ မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေ မမြင်ရဘူး၊ WebsiteDesign.com.mm က ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲ။
Q: Myanmar fonts cannot be seen appropriately in some websites. Do you have the solution?
ဖြေ။ စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ Zawgyi Font နဲ့ Standard Unicode ကွဲပြားနေခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးရလာဒ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့WebsiteDesign.com.mm မှ ဆောက်လုပ်တဲ့ Website အားလုံးကို Zawgyi Font ရော၊ Standard Unicode ရော၊ Browser အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပြေမြင်ရအောင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။
A: Yes, we do have the solution. All the websites we build are compatible with both Standard and Non Standard Unicode.
မေး။ Website လွှင့်တင်ပြီးတဲ့အခါ Customer တွေကကော ရှာတွေ့မှာပါလား။
Q: Will my website be seen on Google?
ဖြေ။ Google မှာ လူကြီးမင်းရဲ့ Brand နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ရှာရင် Customer တွေကျိန်းသေရှာတွေ့မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ Agency က ဆောက်တဲ့ Website အမျိုးအစားအားလုံးကို အခြေခံ SEO နည်းပညာ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် Google Friendly Webiste များသာဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ စကားစုသီးသန့် (Specific Keywords/ Keyphrases) တွေနဲ့ ရှာတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် အဆင့်မြင့် SEO Marketing ကို သီးသန့် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
A: Your website will definitely be seen on Google via your brand keywords. In fact, all the websites we build are Google Friendly and they are integrated basis SEO technology. You may want to consider engaging Advanced SEO Marketing when you want to be seen via specific keywords or key phrases.
မေး။ တစ်ခြား Company က ဝယ်ထားတဲ့ Domain/Hosting တွေ ရှိပြီးသားကို WebsiteDesign.com.mm နဲ့ Website ဆောက်လို့ရလား။
Q: I already have the domain and hosting. Can I work with WebsiteDesign.com.mm?
ဖြေ။ ရပါတယ်။ လူကြီးမင်းရဲ့ Domain Name နဲ့ Hosting ပိုင်ဆိုင်မှု Access သာရှိပါစေ။ ကျနော်တို့ရဲ့ Development Team မှ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။
A: Of course, yes. Just make sure you have all domain panel and hosting access.
မေး။ WebsiteDesign.com.mm နဲ့အလုပ်အပ်နှံပြီဆိုရင် ဘာတွေ၊ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရမှာပါလဲ။
Q: What are the steps and procedures to work with WebsiteDesign.com.mm?
အလုပ်အပ်နှံသည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု Package ရဲ့ ၅၀% ကိုပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းမှ WebsiteDesign.com.mm ရုံးခန်းသို့ ကြွရောက်၍သော်လည်းကောင်း (သို့) ကျနော်တို့ရဲ့ Project Coordinator မှ လူကြီးမင်း၏ရုံးခန်းသို့ (တစ်ကြိမ်|*) လာရောက်၍သော်လည်းကောင်း ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း၊ ငွေကောက်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Agency မှ လူကြီးမင်းရဲ့ Website လိပ်စာ (www.yourcompany.com) ကို ရနိုင်မရနိုင်စစ်ဆေးပြီး၊ ချက်ချင်း မှတ်ပုံတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Website ဖိုင်များနှင့် Email များသိမ်းဆည်းရန် နေရာချထားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းရဲ့ Website Email (name@yourcompany.com) ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Website အရွယ်အစားအရ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက် ပြီးစီးမည်ကို Project Team မှ (Time Line) နှင့်တစ်ကွရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံမှန်အားဖြင့် Website တစ်ခုဆောက်လုပ်ရန် အချိန်အနည်းဆုံး ၂ ပတ် မှ ၄ ပတ်ကြာမြင့်ပါတယ်။)
လူကြီးမင်း စိတ်တိုင်းကျတဲ့ Webiste တစ်ခုဖြစ်ဖို့Design Team မှ မေးခွန်းမေးမြန်း၍ (Logo, Corporate color, Reference, etc) စသည့် Data တွေကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာ အစမ်းကြည့်ရှုရန် Link ကို Email နဲ့ပေးပို့မှာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း စိတ်ကြိုက် (Review/Revision) များအဆင့်ဆင့်ဖြင့် ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်း စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းရပြီဆိုပါက Development Team မှ Program Coding စ, ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ (Coding စတင်လျှင်စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ခွင့်မပြုပါ။)
Website ထဲမှာထည့်သွင်းရန် အကြောင်းအရာ၊ စာသား၊ ဓါတ်ပုံများကို လူကြီးမင်း မှ အချိန်မီထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်ပြီး၊ အခက်အခဲရှိခဲ့ပါက ကျနော်တို့ WebsiteDesign.com.mm မှ အကောင်းဆုံးကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။
၅၀% ပြီးစီးလျှင်တစ်ကြိမ်၊ ၈၀% ပြီးစီးလျှင် တစ်ကြိမ် လူကြီးမင်းဆီသို့Email ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း ဆက်လက်တင်ပြ ဆွေးနွေးပြီး၊ လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် သွားမှာပါ။
၁၀၀% ပြီးစီးသည်နှင့် လူကြီးမင်း မှ ကျန်ငွေ ၅၀% ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး၊ WebisteDesign.com.mm မှ Customer Website ကို Live လွှင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
You will deposit 50% of the project bill after the confirmation. You may visit us or our project coordinator visits your office once to present and discuss.
We will check the availability of your domain and register. Once it is done, we will allocate hosting space and create web emails (name@yourcompany.com) for you.
Our project team will advice the time line based on the complexity of the project. (Normally,astandard project takes2–4weeks)
Design team will ask you the brief (Logo, Corporate color, Reference, etc)
We will send you the design draft via email to review and revisions.
Once the design is confirmed, the development team will start program coding (No design revision is allowed when coding starts)
Client must provide the content on time. The project team will assist if there should beaneed.
Once after 50% and 80% completions, project team will report you via email, phone to seek feedback.
You will settle the rest 50% remaining bill once the project is completed. The website is launched.
မေး။ Website ဆောက်ပြီးရင် နှစ်စဉ်ကြေးက ဘာလို့ပေးရတာလဲ။
Q: Why is there an annual fee?
ဖြေ။ လူကြီးမင်းရဲ့ Website ကို နှစ်ပတ်လည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း ၊ Website သိမ်းဆည်းရန်နေရာ Hosting အခမဲ့ ပေးခြင်း၊ Domain နှင့်ပတ်သတ်သော Registration, Renewal Extension စသည်တို့ကိုနှစ်စဉ် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် တာဝန်ယူ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
A: The annual fee covers the ongoing maintenance of your website, free hosting space rental and the domain registration, renewal extension and so on.